XOG: Lafta gareen oo ka horyimid siyaasiyiin Aflagaado ku haya maamulkiisa | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Lafta gareen oo ka horyimid siyaasiyiin Aflagaado ku haya maamulkiisa
XOG: Lafta gareen oo ka horyimid siyaasiyiin Aflagaado ku haya maamulkiisa
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa aad uga xumaaday mas’uuliyiin iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo markasta ku hadal qabsada in Madaxda maamulka Koonfur Galbeed uu ku soo baxay masuq maasuq iyo lacag laaliish ah oo la dhiibay.
Lafta gareen ayaa sheegay in siyaasiyiinta markasta oo hadla ku soo qaata Khudbadooda xumaanta ay ka aamisan yihiin maamulka Koonfur Galbeed ay yihiin kuwo ku fashilmay siyaasadda dalka ama doonaya iney boobaan hantida Ummadda Soomaaliyeed ay leedahay.
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu diyaarinayo dacwad ka dhan ah siyaasiyiintaas uu sheegay inuu gudbinayo haddii ay joojin waayaan daacada ay ku hayaan Shacabka Koonfur galbeed iyo maamulkooda.
Mas’uuliyiinta haatan farta ay ku godan tahay ayaa waxaa qeyb ka ah mucaaradka Dowladda oo ay ku iraan madaxweynayaashii hore ee dalka soo mara sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed,kuwaasi oo dhowr mar oo ay warbaahinta la hadleen aflagaadeeyay maamulka Koonfur galbeed.
Madaxweynaha Koonfur galbeed Lafta gareen ayaa la aamisan yahay inuu ku soo baxay doorasho afduub iyo masuq maasuq ku dheehneyd oo ay beesha caalamka xittaa qirtay.